» प्रदेश भर सडक सञ्जाल बिस्तार गर्दै बागमती प्रदेश सरकार,कुन जिल्लामा कति बने त सडक ?
प्रदेश भर सडक सञ्जाल बिस्तार गर्दै बागमती प्रदेश सरकार,कुन जिल्लामा कति बने त सडक ?
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १९:१४
देशमा संघीयता आएपछि तिनै तहका सरकार देशको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासमा तीव्र गतिमा लागिपरेका छन् ।
संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारण पहिले नै आइसकेको थियो । तर संघीयता आए पश्चात् प्रदेश सरकार भने नयाँ अवधारणका रुपमा स्थापना भयो । प्रदेश सरकारले मुलुकको भौतिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश सरकार पहिलो सूचिमा छ ।
बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको विकास निर्माणका काममा लागिपरेको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्र्तगत् यातायात पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेशभित्र ९० दशमलव ७८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो । यस्तै एक सय ६६ दशमलव ७८ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको प्रदेश सरकारले ४ सय १८ दशमलव ९९ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १४ ओटा पुल निर्माण गरेको थियो भन २२ ओटा पुल सर्बे डिजाईन र २ सय १० किलोमिटर सडकको सर्बे डिजाईन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा यातायात निर्देशनालय बागमती प्रदेशले कुल ६ अर्ब ४९ करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैया बजेटमध्ये ३ अर्ब ६७ करोड ५ लाख ९८ हजार रुपैया खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १४ किलोमिटर कच्चा सडक निर्माण गरेको छ । त्यस्तै ५ सय २४ किलोमिटर सडक सर्भेको काम गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले कुल बजेट ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये २३ कारोड ५४ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । पूवार्धार विकास कार्यालय ललितपुरले २६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण, ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १० किलोमिटर ग्राभेलिङ, ६ किलोमिटर स्ल्याब ढलान र ४ वटा पुल निमार्ण गरेको छ ।
पूर्वाधार कार्यालय ललितपुरले आर्थिक वर्ष २०६७ ÷०७७ मा कुल बजेटको एक अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँमध्ये ६८ करोड ४५ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेले ६२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ भने ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । यस्तै २१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको निर्देशनालय हेटौंडाले जनाएको छ । २ किलेमिटर सडक स्ल्याब ढलान र ३ वटा पुल निर्माण गरेको जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७÷०७७ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेले कुल १ अर्ब २९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पूवार्धार विकास कार्यालय चितवनले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २७ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेका छ । ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ३६ किलोमिटर ग्राभेलिङ, ८ किलोमिटर स्ल्याब ढलान र ४ वटा पुल निमार्ण गरेको निर्देशनालले जानकारी दिएको छ ।
पूर्वाधार कार्यालय चितवनले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल बजेट एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँमध्ये ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । पूवार्धार विकास कार्यालय नुवाकोटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५४ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ भने ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १६ किलोमिटर ग्राभेलिङ, ३ किलोमिटर स्ल्याब ढलान र एउटा पुल निमार्ण गरेको हो ।
पूर्वाधार कार्यालय नुवाकोटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल बजेट एक अर्ब १९ करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये ७१ करोड ७५ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । पूवार्धार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा एक सय २२ किलोमिटर कच्चि सडक निर्माण गरेको छ भने ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५२ किलोमिटर ग्राभेलिङ, २ किलोमिटर स्ल्याब ढलान र ५ वटा पुल निमार्ण गरेको हो । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल बजेट एक अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
पूवार्धार विकास कार्यालय रामेछापले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा एक सय १० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको निर्देनालयले जानकारी दिएको छ । ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ६ किलोमिटर ग्राभेलिङ, १ किलोमिटर स्ल्याब ढलान र २ वटा पुल कार्यालयले निमार्ण गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल बजेट एक अर्ब १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमध्ये ९३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १३ किलोमिटर कच्चि सडक निर्माण गरेको छ ।
कार्यालयले १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ३० किलोमिटर ग्राभेलिङ गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल बजेट ४६ करोड ८२ लाख रुपैयाँमध्ये ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय खुर्कोटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४७ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ भने ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७१ किलोमिटर ग्राभेलिङ र ६ किलोमिटर स्ल्याब ढलान गरेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल बजेट ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मध्ये ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सडक निर्माणसंग संगै सडक पुल निर्माणलाई समेत अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकार भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालय अन्र्तगत यातायात निर्देशनालयले प्रदेश सरकार स्थापना भए पश्चात् काठमाडौमा एउटा , ललितपुरमा ५ वटा ,चितवनमा ३ वटा, मकवानवपुरमा २ वटा ,भक्तपुरमा एउटा, नुवाकोटमा ३ वटा, काभ्रेपलान्चोकमा ५ वटा, धादिङमा एउटा, सिन्धुपाल्चोकमा ५ वटा, सिन्धुलिमा एउटा, दोलखामा ३ वटा र रामेछापमा एउटा गरी जम्मा ३२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भैसकेको यातायात निर्देशनालय बागमती प्रदेशका निमित्त निर्देशक सहदेब भण्डारीले बताउनुभयो । सम्पन्न भैसकेका पुलहरुको जम्मा लागत ७३ करोड ६७ लाख रुपैया रहेको निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो । यस्तै प्रदेश सरकारले यस वर्ष संघिय सरकारको सर्सत अनुदान ३६ करोड ५७ लाख रुपैयामा ५८ वटा पुल निर्माणको काम सुरु गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्नै बजेटबाट यसै आर्थिक वर्षमा ६० करोड ४३ लाख रुपैयाको लागतमा ६६ वटा पुल निर्माण गर्ने यातायात निदैशनालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।